Ogaden News Agency (ONA) – OGEYSIIS: Shirar Muhiima ah oo Looga Hadlayo Qadiyada Ogadeniya. 21 iyo 29 January 2012 London UK.
OGEYSIIS: Shirar Muhiima ah oo Looga Hadlayo Qadiyada Ogadeniya. 21 iyo 29 January 2012 London UK.
Posted by ONA Admin	/ January 18, 2012
Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee wadanka UK ayaa waxa ay ogeysiinaysa dhamaan shacabweynaha Somalida Ogadeniya iyo Somali weyn inay kasoo qeybgalaan shirar isdaba joog ah oo ka furmaya magaalada London ee wadanka UK. Shirarkan ayaa waxaa ay yihiin kuwo muhiim ah oo looga hadlayo qadiyada Somalida Ogadeniya. Waxaana kulamadan ay dhacayaan 21 January 2012 iyo 29 January 2012.
Shirka hore oo todobaadka soo socda Sabtida 21 January furmaya ayaa lagu qaban doona xarunta Amnesty International ee magalada London Shirkaan oo loogu magac daray
A Human Rights conference on The state of Human Rights in The Horn of Africa, Ethiopia in Particular.”
Ayaa lagaga xaajoon doona arrimaha xuquuql insaanka gaar ahaan tacadiyada iyo xasuuqa ay Woyanuhu ku hayaan Somalida Ogadeniya iyo guud ahaanba shucuubta Oromada iyo qowmiyadaha kale ee Ethiopia ku hoos duleysan. Waxaana shirkan soo qaban qaabisay Jaaliyada Somalida Ogadeniya iyo Haayada Xuquuqul insaanka, waxaa sidoo kale kula bahaysan qowmiyadaha kuhoos dhiban taliska qalafsan ee KT Zenawi. Qodobada shirkan looga hadli doona waxaa kamid ah.
Qaxootiga u qaxay Somaliya iyo Djibouti iyo waxay la kulmaan
Xasuuqa Ogadeniya kasocda.
Dhulka Ethiopia ee la beecgeeyay iyo saameyntiisa.
Horumarka TPLF iyo Cabudhintiisa.
KULANKA OGADENIYA EE UK
Shirkaan waxaa daba Socda Kulan aad u weyn oo qabanqaabadiisa muddo socotay oo lagu wado in dhamaan shacabweynaha Somaliweyn ee taagerada u ah Halganka Soo jireenka ah ee lagu raadinayo Xoriyada dhulka Somalida Ogadeniya ay isugu imaan doonaan magaalada London. Shirkan oo ay kasoo qeyb gali doonaan madax sar-sare oo kamid ah Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya.
Gaar ahaan Guddomiyaha Jabhada Admiral Maxamed Cumar Cismaan ayaa kamid ah Martisharafta ka hadli doonta shirkaas.
Waxaa kale oo shirkan ku casuuman xubno kamid ah Dowlada Wadanka Britain iyo masuliyiin ka tirsan Baarlamaanka UK.
Sidoo kale waxaa kasoo qeybgali doona oo hadalo kasoo jeedin doona Aqqoonyahano ku xeel dheer arrimaha Geeska Afrika, Arrimaha Xuquuqul Insaanka. Waxaa kale oo lagaga warbixin doona Dhacdooyinkii oogu danbeeyay ee Ogadeniya. Waxaa kale oo kasoo qeybgali doona culumada oo kasoo jeedin doona wacyi. Waxaa ka madhneyn Gabayo iyo Hiddaha Dhaqanka Somalida Ogadeniya.
Saacada: 2PM illaa 10PM
8, cavandish parade
bath road , hounslow,middx
opp:hounslow west station
waxii faahfaahin aha kala xidhiidh: